December 3, 2021 555
बिहेको दिन अर्कै बेहुलीको मण्डप पुगेपछि…
आफ्नो विवाहको दिन हरेक व्यक्ति उत्सुक हुन्छन् । नयाँ व्यक्तिसंग गासिएको सम्बन्धपछि उनैको साथमा पुरै जीवन बिताउने भएकाले पनि विवाह उत्सुकमय हुन्छ । तर कुनै बेहु|लाले आफ्नी बेहुलीको सट्टा अरु नै बेहुलीसंग विवाह गर्न विवाह मण्डप पुग्छन् होला ?
इण्डोने|शियाको सेन्ट्रल जावा`स्थित मेगलैंगमा एक विवाह समा`रोहमा गूगल म्यापको प्रयोग गर्दा एक बेहुला आफ्नी बेहुलीको सट्टा अर्की बेहुली समक्ष पुगेका छन् । ट्रिब्यूनन्यूज डट कमका अनु`सार एक बेहुला आफ्नो विवाह हुने दुलहीको समारोह स्थलको सट्टा अर्की बेहुली`कोमा पुगे ।
विवाहमा जादाँ बेहु`लाले गूगल म्याप पछ्याउदै जादाँ अरु कसैको विवाह स्थानमा पुगे । तर त्यहा विवाहको तयारी भने थिएन । विवाह`अघि इन्गेजमेन्ट गर्ने कार्य`क्रम भएकाले त्यसैको पार्टी भइरहेको थियो ।
जहाँ यी बेहुला पुग्ना|साथ बेहुलीका परिवार|संग हात मिलाए र विवाह स्थलमा तयार पारेको कुर्सीमा समेत बसे । त्यस इन्गेज`मेन्टमा पुग्नु पर्ने बेहुला ढिला हुदाँ र अर्का बेहुला त्यहा पुग्दा बेहुलीका परिवार`लाई उनीहरु नै इन्गेज`मेन्टमा आएको ठाने ।
बिहे गर्न पुगेका बेहुला इन्गेज|मेन्टको कार्यक्रममा केहिबेर कुरे । किन|भने त्यहाकी बेहुली मेक|अप गर्दै थिइन् । तर जब इन्गेज|मेन्ट गर्ने विधि अनुसार उनी तयारी|का साथ आइन् तब भने त्यहा ठुलो हंगामा भयो । ति बेहुलीले ति आफ्नो बेहुला नभएको बताइन् ।
यसका साथै बेहुला|ले पनि आफुहरु गल्तीका कारण त्यहा पुगेको भन्दै माफि माग्दै त्यहाबाट गए । यसबारे त्यहा`की बेहुली उल्फाले बताए अनुसार उनको र अर्की बेहुली`को विवाह स्थल नजिकै भएकोले बेहुला झुक्किएर त्यहा आइपुगे । यस बिषयमा भने बेहुलाले आफु|लाई सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै बिहेको दिन सुहागरातको बेला बेहुलाको गोप्य कुरा थाहा पाएपछि मच्चियो हंगामा…
Prevभिडभाड बाटोमा नाच्दै टिकटक बनाउँदै गरेकी यी युवतीलाई पर्यो यस्तो फसाद (भिडियो सहित)
Nextआज पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको डलरको भाउ
यति सानी नानीले मलाई मेरो ‘श्रीमान’ चाहियो भनेको भिडियो भाइरल…(भिडियो हेर्नु`होस)